Ardayda qaaliga ah, waxaa jira boqolaal casharro ah oo Jarmal ah oo ku yaal boggayaga. Markaad codsato, waxaan casharradan uqiyaasey ardayda dugsiga hoose iyo sare waxaan uqeybiney fasallo Waxaan uqeexanay casharadeenii Jarmalka oo loo diyaariyey iyadoo la raacayo manhajka waxbarashada qaranka ee laga isticmaalo dalkeena ardayda fasalada 11aad iyo 12aad oo hoos ku taxan.
Sidaad ogtahay, casharada Jarmalka ee darajooyinkan xoogaa tabaryar ayey usocdaan, gaar ahaan maadama fasalada 12aad ay udiyaar garoobayaan imtixaanka gelitaanka jaamacada. Ku celcelinta guud waxaa lagu sameeyaa iskuulada qaarkood maadooyin cusubna waxaa lagu dhigaa iskuulada qaarkood. Sidaa darteed, liiska koorsooyinka aan hoos ku bixinayno waxaa laga yaabaa inaysan si sax ah ula jaan qaadi karin maadooyinka lagu dhigo dugsiyada. Sababtaas awgeed, qodobkaan, waxaan go'aansannay inaan si wadajir ah u siino fasallada 11-aad iyo 12-aad.
Hoos waxaa ku yaal liiska casharadeenna Jarmalka oo tusay ardayda dhigata fasallada 11aad iyo 12aad ee dhammaan waddankeenna. Liistada cutubyada Jarmal ee hoos ku qoran waxay u kala horreeyaan mid fudud oo dhib badan. Si kastaba ha noqotee, isku xigxiga maadooyinka waxay ku kala duwanaan karaan buugaagta Jarmalka qaarkood iyo buugaagta dheeriga ah.
Mawduucyada la muujiyey guud ahaan fasalada 11 iyo 12 ee Turkiga waxaa ka mid ah, laakiin lagama yaabo inay ku shaqeeyaan qaybo ka mid ah sida ay doorbidayaan macalinka Jarmalka, ama waxaa lagu dari karaa iyada oo la tixraacayo cutubyo kala duwan, cutubyada qaar waa la ogolaan karaa, yacni 11 fasal fasalka ku xiga ama qayb ka mid ah 9. Inta fasalka lagu jiro laga yaabaa in laga shaqeeyay. Si kastaba ha noqotee, mowduucyada lagu soo qaatay casharrada Jarmalka ee fasallada 11aad iyo 12aad waa sida soo socota.
Fasalada 11aad iyo 12aad Casharka Jarmalka
Xubnaha jirka ee Jarmalka
Qodobka sifaynta Jarmalka
Jarmal aan amar la'aan ahayn
Jarmal Trennbare Verben
Qiimeynta Jumlada Jarmalka
Isku-dhafka sumadda Jarmalka
Ardayda qaaliga ah, mowduucyada lagu soo qaatay casharada Jarmalka ee fasalada 11aad iyo 12aad guud ahaan waa sida kor ku xusan. Dhamaantiin waxaan idiin rajeyneynaa guul.
# Fasalada 11aad iyo 12aad Casharka Jarmalka
Tags: Casharrada Jarmalka ee fasalka 11aad, 11. fasalka nasiibka mawduuca, Casharrada Jarmalka ee fasalka 12aad, 12. fasalka nasiibka mawduuca, german 11 mawduuca fasalka, Maadooyinka fasalka 11aad ee Jarmalka, german 12 mawduuca fasalka, Maadooyinka fasalka 12aad ee Jarmalka